Deblistering Machine wdg-60N - China Halo Pharmatech Co., Ltd
Wdg-60N bụ a patented ngwá nke nwere ike na-capsules, mbadamba na ndị ọzọ ngwa ngwa si ọnya Ukwu site extrusion. Nke a na ngwá nwere pụrụ iche uru n'ihi na ya elu ọsọ, oke nke Erere-inweta, na harmlessness ka mkpụrụ ọgwụ. Ọ bụ a nkịtị ngwá maka Erere-inweta na ahịa. N'ihi na dị iche iche nke níle Önwa Plastic Board (APB), wdg-60N a kwadebere n'ụzọ na-eme mgbanwe owuwu aka mfe. E jiri ya tụnyere ndị ọzọ yiri ígwè ọrụ, wdg usoro ndị kasị mma Erere-inweta igwe buru ibu ọgwụ n'ichepụta ụlọ ọrụ, karịsịa n'ihi na ha na ọnya mmepụta nsogbu.
Wdg-60N bụ a ọkara akpaka igwe, udia aka na na 60 PC / min ka kacha arụ ọrụ ọsọ. Ọ bụ na ọdabara maka fọrọ nke nta ka ọ bụla ụdị ọnya mkpọ.
Previous: Deblistering Machine wdg-60A
Osote: Deblistering Machine wdg-120A